बिहान उठेर कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्ती नत्र हुनेछ स्वास्थ्यमा हानी - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
बिहान उठेर कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्ती नत्र हुनेछ स्वास्थ्यमा हानी
हामी स्वास्थ्य जीवनशैलीको खोजीमा छौँ । यसमा खानपानदेखि लिएर हामीले गर्ने शारीरिक गतिविधिसँगै कुन समयमा के गर्ने ? के नगर्ने जस्ता कुराहरू पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी बिहान हामी कति बेला उठ्छौँ र उठेपछि के के क्रियाकलाप गर्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो दिन कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । केही कामहरू छन् जो हामीले बिहान उठेर गर्नुहुदैछ ।
जसलाई विस्तृतमा यसरी उल्लेख गरिएको छ:
१. हत्तपत्त उठेर काममा नलाग्ने
आँखा खुलेपछि थोरै समय ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ । केहिछिन पछि दाँयातर्फ फर्केर उठ्नुपर्छ । यसरी उठ्दा सुप्त अवस्थामा शिथिल रहेको उर्जा शरीरमा राम्ररी सञ्चार हुनपुग्छ । यसले शरीरमा उर्जाको सञ्चारलाई सन्तुलित गर्छ । आरामसाथ उठेर लामो एवं गहिरो सास लिने, मनतातो पानी पिउने ।
२. स्ट्रेचिङ गर्ने
सुतेको समयमा हाम्रो शरीरको मांशपेसी, खासगरी मेरुदण्डको हड्डी कठोर भएको हुन्छ, जसलाई सामन्य अवस्थामा फर्काउनका लागि शरीरलाई स्ट्रेच गर्नुपर्छ । तीनचार पटक शरीर स्ट्रेच गर्ने र बाँया फैलिएर सकारात्मक उर्जालाई स्वयम् महसुष गर्ने । यसले दिनभर शरीर चुस्त र फूर्तिलो बन्छ ।
३. ब्रेकफास्ट गर्ने
बिहान उठेर ब्रेकफास्ट नगर्नु भनेको मधुमेह, मोटोपनलाई निमन्त्रणा गर्नु हो । यस किसिमको बानीले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ । विहान उठेर ब्रेकफास्ट नलिदा हाम्रो शरीरमा अतिरिक्त तनाव पर्छ । रातीको खाना र बिहानको खानाबीच लामो ग्याप हुन्छ, जसले ब्लड सुगर लेभल कम हुन्छ । यदि सुतेर उठेको एक घण्टामा हामीले केहि खाएनौ भने, ब्लड सुगर लेभल अझ घट्छ । ब्रेकफास्ट हेल्दी र ताजा हुनुपर्छ । चिया, बिस्कुट जस्ता खानेकुराभन्दा भिजाएको बदाम, रोटी, फल सेवन गर्नुपर्छ ।
४. उठ्नसाथ मोवाइल चेक नगर्ने
६. एक्सरसाइज गर्ने
धेरैजसो मानिस बिहान उठ्नसाथ काममा लाग्छन् । त्यसअघि हल्का व्यायाम गर्नैपर्छ । शारीरिक काम गर्नु र व्यायम गर्नुमा फरक छ । काम गर्दा शरीरको एक भागलाई मात्र असर परिरहेको हुन्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । तर, प्रफुल्ला मुद्रामा गरिने व्यवस्थित व्यायमले शरीरको समग्र भागलाई लाभान्वित तुल्याउँछ ।
७. उठ्नसाथ मलमुत्र त्याग गर्ने